Semalt इस्लामाबाद विज्ञ: रेफरर स्पाम के हो र यसलाई कसरी बेवास्ता गर्ने?
यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइटको ट्राफिक दैनिक निगरानी गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि यसले कर्षो प्राप्त गरिरहेको छ भने, सम्भावनाहरू यो छ कि रेफरर स्पाम तपाइँको ब्लगमा लाग्यो। तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा, तपाईंले अधिक र अधिक इनबाउन्ड लिंकहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको साइटमा क्वालिफिक ट्राफिक थपेको जस्तो देखिन्छ, तर यो गल्ती हो। जब तपाईं ध्यानपूर्वक इनबाउन्ड लिंकहरूको रेफरर स्रोतहरूको विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तपाईं केहि अजीब डोमेन नामहरू देख्नुहुनेछ जस्तो कि best-seo-offer.com, get-Free-Traffic-Now.com, 4webmasters.org, best-seo-solution.com , बटन- for-website.com, mamakemoneyonline.com, blackhatworth.com, ilovevitaly.com, priceg.com, resellerclub.com, prodvigator.ua, savetubevideo.com, kambasoft.com, स्क्रिएन्टੂਲकिट.क., र सुपरिएन्ड.org।
Semalt बाट एक शीर्ष विशेषज्ञ, Sohail Sadiq, आश्वासन दिन्छ कि केहि तकनीकहरूको साथ रेफरर स्प्यामबाट छुटकारा सम्भव छ।
जब तपाईंले भर्खर भर्खर आफ्नो वेबसाइटको विकास गर्नुभयो र एसईओ गर्नुभएन भने, तपाईंको साइटले कुनै ट्राफिक प्राप्त गर्ने सम्भावना हुँदैन। तर यदि यो अज्ञात स्रोतहरूबाट ट्राफिक प्राप्त गर्दछ, तपाईंले मूल्या should्कन गर्नु पर्छ यो ट्राफिक कहाँबाट आउँदछ र यसले कसरी तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातासँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। केहि अन्य डोमेन नामहरू तपाईंले दिमागमा लिनुपर्दछ ती हुन् socialseet.ru, oo-8-oo.ru, vodkoved.ru, iskalko.ru, myftpupload.com, Luxup.ru, Websocial.me, slftsdybbg.ru, ykecwqlixx.ru, seoexperimenty.ru, Econom.co, darodar.com, edakgfvwql.ru, सल्लाहforum.info। कुनै पनि सन्दर्भकर्ता स्पाम स्प्यामर्सले तपाईंको Google एनालिटिक्स खातामा थप गर्दछ, र बाउन्स दर १००% सम्म छ। खोज ईन्जिन जस्तै केहि पनि, अन्य साइटहरूमा लिंकहरू, ब्यानर विज्ञापनहरू र ईमेलहरूले तपाईंलाई यी शंकास्पद वेबसाइटहरूमा पुन: निर्देशित गर्न सक्छ। प्राविधिक रुपले बोलेमा, यसले तपाईको गुगल एनालिटिक्स खातामा HTTP अनुरोध पठाउँदछ र उही अनुरोध पछि तपाइँको वेब सर्वरमा पठाइन्छ। तपाईंले सन्दर्भकर्ता स्प्यामको आईपी ठेगाना फेला पार्न सक्नुहुनेछ र यसलाई तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा ब्लक गर्नुहोस्। एक सन्दर्भकर्ता तथ्याical्कीय वेब विश्लेषणमा उपयोगी छ र निर्धारित गर्दछ कि कुन वेबसाइटहरूले अधिक ट्राफिक उत्पन्न गर्दछ। यसका साथै यसले प्रभावकारी र शक्तिशाली मार्केटि। रणनीति बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र तपाईंलाई इन्टरनेटमा तपाईंको साइटको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।
कसरी स्प्यामरहरू यसको प्रयोग गर्छन्?
HTTP रेफरर सँधै परिमार्जनका लागि खुला छ र सजिलै सम्पादन गर्न सकिन्छ, जसले यसलाई वेबमास्टरहरूको लागि श for्कास्पद र स्पामरहरूको लागि लाभदायक बनाउँदछ। ह्याकरहरू र स्प्यामरहरू प्राय: रेफरर सम्पत्तिलाई वेब पृष्ठमा परिवर्तन गर्दछ जुन उनीहरू प्रचार गर्न चाहान्छन्। त्यहाँ दुई मुख्य कारणहरू छन् किन तिनीहरू त्यस्ता चीजहरू गर्न छनौट गर्छन्।
स्प्यामरले स्वचालित स्क्रिप्टहरू विकास गर्दछ जसले सयौंदेखि हजारौं साइटहरूमा नक्कली रेफरल URL हरूको भ्रमण गर्दछ, सामान्यतया प्रति दिन १० भन्दा बढी भ्रमणहरू। वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूले ट्राफिकमा वृद्धि देख्न सक्दछन् र प्रभावहरू उनीहरूको गुगल एनालिटिक्स खाताहरूमा ठूलो संख्यामा उत्पन्न गरियो। यी नक्कली यूआरएलहरू प्रायः तपाईंको एड्सेन्स खाताको साथ ट्रिक गर्न र तपाईंको लग फाइलहरू सम्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा फिल्टर गर्न सक्नुहुनेछ ताकि स्प्यामरहरूका साइटहरूले तपाईंको तर्फबाट कुनै ट्राफिक प्राप्त गरेनन्।
बाह्य लिंकहरू वृद्धि गर्न
केहि ब्लगहरू र साइटहरूले ठूलो संख्यामा सन्दर्भ प्रकाशित गर्न सक्दछन् र तिनीहरूको साइटहरूमा लिंकहरू फिर्ता समावेश गर्दछ। यसले स्पामकर्ताहरू र ह्याकरहरूले उनीहरूको आफ्नै वेबसाइटहरूको लागि धेरै ब्याकलि gene्कहरू उत्पन्न गर्न दिनेछ, जसले अन्ततः उनीहरूको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण गर्दछ।
कसरी रेफरर स्पाम रोक्न?
यदि तपाइँ एक वर्डप्रेस वेबसाइट को प्रबन्धन गर्नुहुन्छ, तपाइँ सजिलै स्टोप वेब क्रलरको नाममा प्लग-इन स्थापना गरेर रेफरर स्पाम रोक्न सक्नुहुन्छ। यो प्लगइन या त वेबबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ वा साथीबाट लिन सकिन्छ। एकचोटि स्थापना भएपछि, यसले तपाईंको WordPress साइटलाई एक हदसम्म रेफरर स्पामबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ।